lundi, 15 novembre 2021 20:52
Pilo kely : Fitaovam-pandrefesana orana eto Madagasikara ny tambazotra serasera
Arakaraky ny fitohanan'ny tambazotra serasera no ahalalana ny habetsaky ny orana ao ivelany ao.
Dodo aby fa avy orana.
lundi, 15 novembre 2021 20:50
Famokarana herinaratra : Hita ny vola ho an'ny Tetikasa SAHOFIKA hamahàna ny olan'ny fahatapahan-jiro lava
Nosoniavina androany faha 15 Novambra 2021 teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny fifanaraham-piarahamiasa momba ny tetikasa SAHOFIKA.
SAHOFIKA dia tetikasa famokarana herinaratra avy amin'ny riandrano goavana indrindra ho tanterahina eto Madagasikara, izay hanana tanjaka 192 MW, ka hiitatra hatramin’ny 300 MW.
Fiaraha-miombon’antoky ny Ministera sy ny Orinasa Jirama ary ny Orinasa NEHO no hanatanterahana izany.
Olona hatrany amin’ny 8 tapitrisa no hisitraka ity tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny rian-drano ity, izany hoe tokatrano miisa 1.6 tapitrisa eo ho eo.
Afaka dimy taona any no vinan’asa hanatanterahana izany.
lundi, 15 novembre 2021 18:11
Raharaha Danil Radjan : Nihemotra indray ny fitsarana
Tsy raikitra raha tokony ho natao ny herinandro teo ny raharaham-pitsarana mikasika ilay vono olona ka nahafatesan’ilay karana mpandraharaha antsoina hoe : Ameralli Danil Radjan, nitranga teny Ivandry tamin’ny septambra 2020.
Efa tao amin’ny efitra fitsarana tetsy Anosy tamin’io fotoana io ireo efa-dahy voarohirohy amin’ity raharaha ity, dia i Lionel Lelièvre, tompona orinasa misahana fiarovana sy fiambenana, miampy lehilahy telo izay mpiasa ao amin’ny orinasa tantaniny ihany.
Efa namadibadika ny antontan-taratasin’ady ny mpitsara, ary tamin’ny fotoana hanombohan’ny fifandaharana indrindra no nilaza izy fa tsy mahefa mitsara ny raharaha ny Fitsarana.
Tsy nambara ny antony fa dia samy gaga teo ny rehetra. Ny hany nambaran’ny mpitsara dia hoe : mihemotra ho amin’ny volana desambra izay ankatoky ny fikatonan’ny taom-pitsarana 2021, indray ny fifandaharana.
lundi, 15 novembre 2021 16:48
Mety mahasoa anao : Fanondrahana goutte à goutte
Ny zava-maniry, na voninkazo na voankazo na anana dia mila rano avokoa.
Samy manana ny fatran-drano ilainy izy.
Misy ireo zava-maniry tsy dia tia tondrahana ny raviny, toy ny voatabia sasany. Nefa matetika dia maka siny na tuyau hatrany isika manondraka azy ireny.
Tsara ho fantatra fa matory ny zava-maniry ny atoandro, fa ny hariva izy no mifoha, nefa dia tondrahantsika ny atoandro izy matory iny, ka tsy hihinan-kanina (rano sy sela) izy amin'iny. Mety ilaina ihany anefa izay mba tsy ahamay ny masoandro azy, nefa mety hafana iny rano iny ka andoro azy.
Ny fahafantaranao ilay zava-maniry na fambolena izany dia anondro anao ny rano, ny fotoana, ny fomba fanondrahana azy.
Miasa eto izany ny fitaovana manokatra na manidy ny rano. Arrosage automatique.
Tsy dia lafo loatra ny vidiny, azo afarana amin'ireny site internet ireny. Tany Chine no nafarana, eo amin'ny 40$ eo.
lundi, 15 novembre 2021 16:06
Imbiki Herilaza : Mitohy ny fidinana ifotony aty Toamasina
Toanga eto Toamasina ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana IMBIKI Herilaza, manohy ny fidinana ifotony.
Nitsidika ny fonjabe, namory ireo mpiaramiasa, nandray ihany koa ireo lehiben'ny fikambanana maro samihafa.
lundi, 15 novembre 2021 15:11
Ampangabe - Ambohidratrimo : Nihitsoka ny fanamboarana CSB Manarapenitra
Ny vahoaka efa nanantena hoe : hisy CSB Manarapenitra (Hopitaly Manarapenitra no Filazan’ny mponina azy) hitsangana ao amin’ny Kaominina Ampangabe, Distrika Ambohidratrimo, Faritra Analamanga.
Tetikasan’ny filoham-pirenena izy io, kinanjo nihitsoka efa ho 10 volana izao ny asa, na efa nandraisan'ny orinasa mpanao azy ampaham-bola aza.
« Parpaing » na ireo karazana biriky vita latsa-tsimenitra no hany hita eo amin’ilay toerana, fa tsy misy asa mandeha.
lundi, 15 novembre 2021 13:06
Ady tany Route du Fiherenana Toliara : Nanao ramoramanana ny Sinoa
Tany iray misy eo amin'ny 2ha eo, titre "Route de Fiherenana 6ème partie" ao Anketraka, Distrikan'ny Toliara 1, Faritra Atsimo andrefana, Faritany Toliara no efa nalain'ny fanjakana nanamboaran-dalana ny taona 1964, ka efa nahazoan'ny tompony fanonerana ara-bola tanteraka.
Ireo ambin'ny tany tsy nisy fotodrafitrasa kosa dia nomen'ny fanjakana ny kaominina Toliara I, ka nisy fianakaviana 11 nangataka ireo ambin-tany ireo.
Nahazo alalana hanorina tamboho sy anangana fotodrafitrasa tao amin'ny toerana avokoa ireto fianakaviana ireto, izay fanomezan-dalana avy amin'ny kaominina.
30 taona aty aoriana anefa vao mipoitra ny nilaza fa mpandova ilay tany efa nahazoan'izy ireo onitra tamin'ny fanjakana, ka nitondra taratasy avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, fa averina amin'izy ireo ny tany satria tsy nisy nanamainty molaly sy tsy nisy nanorina fotodrafitrasa (terrain nu), araka ny filazan'izy ireo, rehefa nandoa vidin-tany 2ha ao Toliara ambonivohitra amin'ny 600 000ar.
lundi, 15 novembre 2021 08:12
Bongatsara – Atsimondrano : Angalarin’ny jiolahy ny varavaram-by ka hatramin’ny tafona kabone
Tsy mandry fahalemana ny tany. Mirongatra ny halabotry. Miitatra amin’ny fangalarana varavaramby, hazo ary hatramin’ny varavarana sy tafona kabone raha ny tranga misy eny amin'ny Fokontany Ambolamena, Kaominina Bongatsara, Distrika Antananarivo Atsimondrano.
lundi, 15 novembre 2021 08:01
Mahanoro - Marolambo : Hatomboka 2022 ny fanarenana io lalana io
Hanomboka amin'ny fiandohan'ny taona 2022 ny fanarenana ny lalana 130 km mampitohy an'i Mahanoro sy Marolambo ao amin'ny Faritra Atsinanana.
Vola 15 miliara Ariary no natokan'ny fanjakana amin'izany asa fanarenana izany araka ny nambaran'ny Minisitry ny Asa vaventy Hatrefindraza Jerry.
Hamboarina ary hatao tara ihany koa ny lalana mampitohy an'i Marolambo sy ny Distrika Antanifotsy, ka ho fantatra amin'ny telovolana faharoa ny taona 2022 ny orinasa hanatanteraka an'izany.
Niaraka nijery teny an-toerana moa ny minisitry ny asa vaventy, ny Solombavam-bahoaka filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Irmah Naharimamy Wilson, ary ny Governora Faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore niaraka tamin'ireo tompon'andriakitra mahakasika izany.
lundi, 15 novembre 2021 07:56
15 novembre : Journée mondiale des écrivains en prison.